Waa Maxay Sababta Xukumadda Somaliland U Diiday Isticmaalka Magaca Puntland? [Akhriso Xog Faah-faahsan]
Wednesday 16th May 2018 17:55:19 in Wararkii Maanta by Tafatiraha Guud
Tan iyo intuu uu talada dalka uu qabtay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay isku dhacyo ciidan dhaxmareen ciidammada qaranka Somaliland iyo kuwa Puntland/Soomaaliya wali hal marna lagama maqal magaca maamulka Puntland isaga iyo xukumaddiisaba.
Markasta oo xukumadda Somaliland ka hadlayso dagalaada jiidaha xadka Soomaaliya waxa ay sheegtaa in uu dagaalku kala dhaxeeyo xukumadda faderaalka Soomaaliya.
Haddaba wasiirka warfaafinta Somaliland Cabdiraxmaan Guri-barwaaqo oo shalay u waramayay laanta Af-soomaaliga ee idaacadda BBC waxa uu sheegay in xukumadda Somaliland aanay dawlad ahaan u aqoonsanayn maamulka Puntland maadaama uu yahay gobol kamida Soomaaliya.
Wasiirka Guri-barwaaqo waxa uu sheegay in ciidanka uu leeyahay gobol kasta oo Soomaaliya kamid ahi ay yihiin ciidanka faderaalka Soomaaliya sidaas darteedna uu dagaalka u dhaxeeyo Somaliland iyo faderaalka Soomaaliya.
Waa markii ugu horeysay ee xukumadd Somaliland soo martaa gabi ahaanba joojiso isticmaalka magaca maamulka Puntland oo ah kan uu dagaalku kala dhaxeeyo.